भुवन केसीको फेबरेट डेस्टिनेसन
कृष्ण भट्टराई, माघ १०, २०७४
विश्वको जति नै सुन्दर ठाउँ पुगे पनि आफ्नै देशको पोखरा अल टाइम फेवरेट । मैले पोखराको भ्रमण कति पटक गरें भन्ने कुरा गन्नै छाडिसकें । समर होस् अथवा विन्टर, झरी होस् वा बादल, मलाई पोखरा हरेक मौसममा उत्तिकै प्यारो छ । म कसैले कहाँ घुम्न जाने भनेर सोध्यो भने पोखरा नै भन्छु । पुरा पढ्नुहोस्
अधिकारी रवीन्द्र, माघ १०, २०७४
लाग्थ्यो, त्यहाँ त्यो समय, मांसपिण्ड खाने भन्दा बढी उनको सामीप्यताको सुवास मिसाई स्त्री यौवनको रसमा मानव सौन्दर्यको अद्भुत प्याकेजलाई चोप्दै सप्य्राक–सप्य्राक पार्ने भोका आँखाहरूको जमात थियो । हो, उनी थिइन्— ममका डल्लाहरूबीच फक्रिएकी सुनाखरी । पुरा पढ्नुहोस्
साप्ताहिक संवाददाता , माघ १०, २०७४
चलचित्र ‘फेरि–फेरि’को औपचारिक घोषणा गरिएको छ । पुरन थापाको लेखन तथा निर्देशनमा बन्ने यो चलचित्रमा लगानी पनि थापाले नै गर्ने छन् । चलचित्रमा अर्पण थापा र अभिनेत्री ऋचा शर्माले जोडी बाध्ने छन् । पुरा पढ्नुहोस्
पूजा र सुदर्शनको रामकहानी
अभिनेत्री पूजा शर्मा निर्देशक सुदर्शन थापाको जोडीले ‘रामकहानी’ बनाउँने भएका छन् । यो जोडीले निर्माण र निर्देशन गर्न लागेको रामकहानीसँग अभिनेता आकाश श्रेष्ठ पनि जोडीएका छन् । आकाशले पुजाको जोडीका रुपमा का मगर्ने भएका छन् । पुरा पढ्नुहोस्
राजाराम पौडेल, माघ १०, २०७४
माघ २० गतेसम्म पोखरा रंगशालामा सञ्चालन हुने यो प्रतियोगितामा तीन विभागीयसहित १२ टिमले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । प्रतियोगितामा ए डिभिजन क्लब मनाङ–मस्र्याङ्दी, नेपाल पुलिस, त्रिभुवन आर्मी, एपीएफ तथा थ्रीस्टार सहभागी भएका छन् । पुरा पढ्नुहोस्
तपाईंलाई सबैभन्दा बढी सताउने कुरा के हो ? किन ?
धेरै त पढाइले नै सताउँछ । किनभने जति अध्ययन गरे पनि रोजगारीका लागि बिदेसिनुपर्छ । देशमा राजनीतिक अस्थिरताबाहेक केही छैन । पुरा पढ्नुहोस्
साप्ताहिक टिम, माघ १०, २०७४
काठमाडौं, पोखरा, बुटवल, नेपालगन्ज, धनगढी, धरान, विराटनगरजस्ता ठूलो आवादी भएका सहरी क्षेत्रमा पुस–माघको छेकोमा पिकनिक स्पटहरू भरिभराउन हुन्छन् । यी सहरहरूमा हरेक वर्ष हजारौं पिकनिक आयोजित गरिन्छन् । यस्ता पिकनिकमा नाचगान सांगीतिक कार्यक्रमदेखि मनोरञ्जक खेल बिंगो, अन्ताक्षरी, पेपर गेम, एक्टिङ, तास आदिसम्म खेलिन्छ । पुरा पढ्नुहोस्
एजेन्सी, माघ १०, २०७४
विवाह गरेको केही समयमै जुलियन क्यान्सरको अन्तिम अवस्था पुगेको कुरा थाहा भयो । त्यो अवस्थासम्म पुग्दा उनीहरूले फ्रान्समा चौथो पटक विवाह सम्पन्न गरिसकेका थिए । सन् २०११ मा पहिलो पटक भेट भएका यी जोडीको धोकोका अगाडि जुलियनलाई लागेको क्यान्सर प्रमुख बाधक भएको छ । पुरा पढ्नुहोस्